Unyaka nonyaka abalungisa izinwele professional ujoyine uhlu zezinwele zabesilisa izinketho ezintsha. Kungani? Yebo, bonke ngoba stylish Mens haircuts ukunikeza umnikazi walo eliyingqayizivele, charm ngabanye. Futhi abesifazane akuzona lalokhokulunga ukuboleka ezinye izinketho ngokwakho.
Ayini zezinwele for amadoda kuyoba efanele ngo-2013?
Ngo-2013, kuyoba zezinwele ethandwa obuphelele amaphakathi, bushelelezi esiphongweni quin, okunikela ngendlela ehloniphekile, futhi engalingani, Ragged - ". Umfana omubi" ukudala isithombe Futhi vogue kuyinto yabasubathi besilisa ukugunda izinwele ezinde (e isitayela Viktora Tsoya) kanye division saziso ku imicu esiphongweni etshekile. Nokho, Party Abantu ukugunda izinwele onjalo afana ngazo kakhulu, evumelana nabo kahle.
Ukuze izinwele ezinde
Uma indoda inezinwele ezinde, ungakwazi qinisa kuze kube semikhawulweni yawo, ngakho ngeke umkhosi isitayela iSpanishi. Akudingi isikhathi esiningi ukuze anakekele ngeke ivumelane abantu yokudala bese udala look romantic futhi ome njengeqanda. Ngokuvamile, i-amadoda nge naphakathi obuphelele izinwele, ziningi izinto ngoba haircuts kanye zezinwele ukuphi. Kubalulekile kuba iso lakho lengqondo futhi ikhono zezinwele self-akhombe.
Ukuze izinwele iDemo
Ngo-2013, futhi ngo-zezinwele fashion madoda stylish ukuze izinwele iDemo nge esiphongweni eside. Uma uhlose ukwenza empilweni yami ezihlukahlukene futhi freshness, ungazama ukwenza izinwele zami style Retro. Esikhathini 50s izinwele wasukuma ayesebenza emuva noma eceleni. Ngakho-ke, uma une izinwele asifinyeziwe, ungakwazi ukuhlola, ikamu izinwele, noma ngaphandle ukudabula naye. Into ebaluleke kakhulu - ukudala umbhalo wekugcina lolungiswe emaphutsa, ukubukeka neqondayo, okuyinto ngakho kulungele ibhizinisi indoda sina.
Okwavelela eyinhloko zezinwele 60 baba umpheki maphambili ekhanda, namanje esiqongweni ukuthandwa. Lezi stylish Mens haircuts umphelelisi amadoda impikiswano. Kodwa musa ukusheshe enze ukukhetha okwesikhathi Ukukhetha olukhulu zezinwele kufanele uthintane ne wezinwele.
Ngokulinganayo haircuts ethandwa futhi stylish amadoda ezifana "ngaphansi zero." Lena kukho olukhulu labo bantu abangena ungafisi, noma ngenxa yanoma yisiphi isizathu akakwazi ukugqoka izinwele zakho mude.
A ezihlukahlukene haircuts iDemo
I ukonga kakhulu ngayo isikhathi nezinto zethu ezibhekwa haircuts iDemo stylish amadoda, ngakho ihlale ethandwa futhi olufanele. Inombolo embodiments we ukusikeka iDemo kunalokho "onogwaja" ebanzi, "ibhokisi", "poluboks" esiphongweni eside noma visor, nabanye abaningi. Okunjalo ukugunda izinwele iDemo ngombala kufanelekile, indoda lokugijima bamupha ukubukeka uyindoda ngaphezulu futhi sexy. Ingasaphathwa lokuthi ungenza ukugunda izinwele ezifana ekhaya, nganoma yisiphi isikhathi ngosizo imishini.
zezinwele amadoda kwesitayela ngo-2013, sibonga ezahlukene onobuhle, izitayela kanye nezixazululo, unikeze ukukhetha elikhulu lamadoda efunwa yibo. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ukuze ukusebenza ukunemba kanye nesitayela kancane kanye nezinwele. Udinga njalo ubuyekeze nezinwele, isitayela izinwele zakho futhi unakekele, mncane kakhulu, usebenzisa amashampu akhethekile izifutho. Yiqiniso, amadoda awekho ukunakekelwa njengoba okuphuthumayo izinwele, abesifazane, kodwa kukhona amalungu amaningi ubulili namandla, okuyinto ebaluleke ngempela.
Imoto yakho engcono
Indlela yokwenza kweqembu umbala inobudlabha zanamuhla?
Zonke izinhlobo Quads
Yemfashini - kwekhanda ngaphandle esiphongweni
Izitayela zezimfashini zezinwele zezinwele eziphakathi
Zezinwele for ebunzini okusezingeni eliphezulu, okuyinto eyokusiza ukugcizelela isithunzi umuntu
Ukwelashwa utwayi abantu: ekwelapheni izimpawu zokuqala ukutheleleka endleleni. Wamafutha utwayi
Ama-Antihistamine ngesikhathi sokukhulelwa: ukulimala noma ukuzuza?
Indlela ukuqaphela nge-ovulation zabo? Indlela ukunquma nge-ovulation by uketshezi
Uyini umehluko phakathi Umbhalo we-Linux abahleli
Musical yaseshashalazini Bagrationovsk: nendawo yokubuka amabhayisikobho, repertoire kanjani ukuze uthole
Herpes zangasese: izimpawu, ukuxakeka, ukwelashwa, uphethwe
Susan Sarandon: Biography, Filmography, empilweni yakho
Uhlolojikelele Mahhala Pdf Abahleli
Acute pyelonephritis: izimpawu kanye nokwelashwa ekhaya ngemithi elwa namagciwane kanye namakhambi. Ukudla nge pyelonephritis acute
Kuyini kangcono imvubelo umshini isinkwa: ukubuyekeza, izici, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Laboratory yamakhemikhali ukuhlaziywa: yemfanelo kanye nencazelo yomsebenzi
Ukuhlola ibhalansi yeBeeline kuyashesha futhi kulula!